Liiska Fudud ee Faylashaada - Liiska Faylka Fudud - Plugin Wordpress
Liis Fudud oo Faylashaada ah
Liiska Faylka Fudud ku siinayaa WordPress degel a liiska faylashaada taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay fur oo kala soo bixi iyaga. Isticmaalayaasha sidoo kale way awoodaan gal faylasha haddii aad doorato, oo waad xaddidi kartaa gelitaanka liiska iyo / ama faylalka faylasha lagu gelinayo oo keliya dadka isticmaala.
Liiska Faylka Fudud ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud faylasha ula wadaagto qof kasta oo ka socda degelladaada internet-ka waana beddel wanaagsan oo loo adeegsado Google Drive, Microsoft OneDrive, DropBox, WeTransfer or FTP. Waxay ku socotaa boggaaga gaarka ah si aad u yeesho xakameyn dheeraad ah.
Liiska Faylka ee Fudud
1 6a2c2b00e3 Home-Bogga-Liiska / Dadka dd98994080
Bogga ugu weyn / Dadka
Gabadh Qurux Badan.jpg
2.63 MB Waxaa laga yaabaa 6, 2021
1.55 MB Waxaa laga yaabaa 6, 2021
714.17 KB Waxaa laga yaabaa 6, 2021
Adeegso Liistada Faylasha fudud
Wadaagista feylasha urur ama bulshada kuwa kale si ay si fudud ugu helaan dukumiintiyadaada.
Markaad u baahatid liistada faylasha la soo bixi karo, sida dokumentiyada ama faylasha warbaahinta.
Mar kasta oo aad u baahato liiska faylasha lagu ilaaliyo galitaan.
Isweydaarsiga feylasha marka cabirku uu aad ugu weynaado lifaaqa emaylka, noloshana kuu fududeyneysa adiga iyo macaamiishaada.
Markii aad u baahatid foomka faylka ee faylka lagu qaado ayaa dadku kuu soo diri karaan faylal.
Tani wax yar oo fudud ah, [eeSFL], wuxuu dhigayaa liiska faylka meel kasta oo aad doorato websaydhkaaga.
Kudar astaamaha "shaashadda" oo dhig galka gaar ah:
[eeSFL showfolder = "Faylka-A"]
Adoo isticmaalaya tan waxaad abuuri kartaa bogag badan oo liiska faylalka ah, oo mid walba uu ku jiro galkiisa different
Isticmaalayaasha hoos ayey uga socon karaan galka la soo bandhigay, laakiin kor uma socon karaan.
Liisku wuxuu leeyahay dejin ballaadhan si aad u habeyn karto muuqaalka iyo shaqeynta liiskaaga.
Bogagga dejimaha maamulka plugin waa Liiska Faylka Maamulka. Halkan waxaad ka maamuli kartaa faylashaada iyo sidoo kale dejinta qalabka. Si fudud ayaad u soo dejisan kartaa, kala soo bixi kartaa, ku furi kartaa, ku dari kartaa sharraxaadyada, dib u magacaabi kartaa oo tirtiri kartaa faylasha iyo faylalka.
Xaddid marin u yeelo liistada si aad u gasho isticmaaleyaasha oo keliya ayaa arki kara. Ama gebi ahaanba qari.
Xaddid yaa geli kara liiska faylka Maamulka iyo dejimaha markaa kaliya doorarka qaarkood ama ka sareeya ayaa arki kara shayga menu.
Ku dar sharaxaad feylasha si aad u sharixi karto waxa ku jira iyo / ama hagaajin karo SEO.
Daar Hor-dhamaadka Maaraynta si isticmaaleyaashaada dhinaca-hore ay leeyihiin astaamo maareyn fayl oo isku mid ah sida dhammaadka-dambe.
Ikhtiyaar ahaan u oggolow isticmaaleyaasha dhinaca hore inay u soo diraan fariimo emayl ah oo leh xiriiriyeyaal faylasha si faylasha loo wadaagi karo.
Tus tusmooyinka miiska liiska faylasha aad dooratay, sida taariikhda faylka, cabirka iyo thumbnail faylka si muuqaalka uu ugu habboonaado baahiyahaaga.
Kala sooc faylasha si aan kala sooc lahayn ama magaca, taariikhda ama cabirka faylka (kor u kaca ama soo degidda).
Wuxuu soosaaraa thumbnails-yada fiidiyowyada *, faylalka sawirrada iyo astaamo dukumiinti u gaar ah.
Dejinta waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin raacitaanka shortcode sifooyinka.
Isku habeyn liiska faylka disk-refresh si loo yareeyo culeyska serverka liisaska waaweyn.
Noocyada Faylka Gal Gal Gal
Fidinta waxay bixisaa foomka gundhigga hore ee dhamaadka faylka ee kor ku xusan liiska faylka, ama keligiis. Waad ka xaddidi kartaa faylka gelinta kaliya isticmaalayaasha gasho ama u oggolaan kartaa qof walba inuu soo rogo.
Halkan ku tijaabi, laakiin fadlan soo gal feylal fiican 🙂 Faylashaada waxaa lagu soo ridi doonaa galka "uploads" ee liiska kor ku xusan.
Astaamaha Foomka Soo rar
Foomka soo dejinta ee fudud oo la isku halleyn karo wuxuu ka shaqeeyaa websaydhyada iyo aaladaha moobaylka si isticmaaleyaashu uga heli karaan meel kasta.
Baadh ama jiid ama soo jiid hal ama in ka badan faylal si aad ugu darto talooyin gelinta. Baarka horumarka cagaaran wuxuu muujinayaa boqolkiiba faylka la soo galiyay, laakiin waxaa jiri doona waqti dheeri ah oo loo baahdo si loo farsameeyo feylka kadib.
Xaddid soo dejinta dhinaca hore oo kaliya Admins ama adeegsadayaasha soo galay, ama dami gebi ahaanba maxaa yeelay uma baahnid muuqaalkan.
Qeex noocyada faylasha ee aad rabto in isticmaaleyaashu awoodaan inay soo rogaan. Sababtoo ah walaac xagga amniga ah, waa inaad kaliya u oggolaataa noocyada aad u baahan tahay.
Waad xadidi kartaa tirada faylasha la soo geliyay gudbinta iyo sidoo kale xaddidi cabirka ugu badan ee faylkiiba.
Xullo inaad hesho ogeysiis emayl mar kasta oo feyl la soo rogo.
Isku hagaaji dhammaan dhinacyada ogeysiinta, sida ka, magaca, maaddada iyo sidoo kale qoraalka farriinta.
Ururi magaca isticmaalaha, emaylkiisa iyo faallooyinkiisa markaad fayl garaynayso ku dar tan ogeysiiska gudahiisa. Macluumaadkan ayaa markaa lagu soo bandhigi karaa liiska faylka haddii la doonayo.
Ku dar Maareeyaha Helitaanka Faylka si loo abaabulo loona xakameeyo marin u helida feylasha iyo liistada faylasha ee ku saleysan isticmaaleyaasha WordPress ama doorarka isticmaalaha. Kaliya u samee faylalka gaarka ah liiskaaga mid ay heli karaan dadweynaha.
Ku dar Raadinta & Pagination kordhinta si loogu oggolaado raadinta magacyada faylka iyo / ama taariikhda safafka. Pagination wuxuu liisaska faylasha dheer u kala jabiyaa bogag yar si markaa ay u fududaato in la maro.
Sida qalabka muhiimka ah, kharash kordhin kasta waa hal-mar, waxaana ku jira dhammaan cusbooneysiinta mustaqbalka. Kordhintu waa inay ahaataa diiwaan gashan in magac domain la isticmaalay. Tag tagga Ku dar astaamaha tab ku qor bogga dejimaha sheyga si aad ugu darto.
Liiska Maamulka | Liistada Liiska | Foomka Gelinta | Notifications | Tools
→ TAG SOO-SAAR SOO SAARKA ←
Waxaa lagu heli karaa luqadahaan:
cz_CZ - Czech (Czech Republic)
da_DK - Deenish (Danmark)
de_DE - Jarmal (Jarmalka)
es_ES - Isbaanish (Isbaanish)
es_MX - Isbaanish (Mexico)
fr_CA - Faransiis (Kanada)
fr_FR - Faransiis (Faransiis)
fr_BE - Faransiis (Biljim)
it_IT - Talyaani (Talyaani)
nl_NL - Dutch (Nederland)
pt_BR - Boortaqiis (Baraasiil)
pt_PT - Boortaqiis (Boortaqiis)
sv_SE - Iswidish (Iswiidhan)
Mashiinnada waa fiican yihiin dhammaantood, laakiin fadlan ila soo xiriir hadaad rabto inaad caawiso wanaajiso ama ku dar tarjumaad.
TAG SOO-SAAR SOO SAARKA | AKHRISKA DIIWAANKA | DADKA UGU DANBEEYA DALKA
KU DAR MAAMULKA ACCESS FILE | KU DARRAD RAADIN & JAAHIL
SIDEE LAGU SAMEEYAA DHAQANKA
* Liiska Faylka Fudud Pro ayaa loo baahan yahay.